Proton TV Apk Download Ho an'ny Android [2022 TRK Movies] | APKOLL
Raha mitady sehatra fialamboly ianao dia eto izahay miaraka amin'ilay fampiharana. Fantatra amin'ny anarana hoe Proton TV ilay fampiharana, izay fampiharana Android ary manolotra fanangonana fialamboly marobe. Manome fantsona IPTV, sarimihetsika, andian-tranonkala, atiny ho an'ny olon-dehibe, horonan-tsary ary maro hafa. Maimaimpoana daholo ny atiny rehetra amin'ity app ity.
Misy karazana fialam-boly isan-karazany, izay tian'ny olona atao amin'ny fotoana malalaka. Matetika ny olona dia tia fialamboly araka ny tontolo iainana. Indraindray ny olona dia tia mijery fahitalavitra miaraka amin'ny fianakaviana ary indraindray tia mijery sarimihetsika.
Noho izany, misy endrika samihafa, izay mazàna aleon'ny olona arakaraka ny toe-tsainy. Noho izany dia tsy maintsy mampiasa rindranasa marobe ny olona, ​​amin'izay ahafahany miditra amin'ny fialamboly ankafiziny. Ka sosotra ve ianao amin'ny fitsidihana fampiharana marobe amin'ny fahafinaretana tsotra?
Raha eny, dia tsy mila sorena intsony ianao, eto izahay miaraka amin'ilay fampiharana, izay ahafahanao manana karazana fahafinaretana mora foana amin'ny fitaovanao Android amin'ny fampiharana iray. Ka te-hijery momba izany rehetra izany ve ianao? Raha tianao izany dia mijanona miaraka aminay vetivety fotsiny ary hizaha izany rehetra izany.
Topimaso momba ny Proton TV App
Izy io dia fampiharana fialamboly Android, izay manolotra karazana fialamboly isan-karazany. Manolotra ny sasany amin'ireo angona fialamboly lehibe indrindra izy io, izay ahafahan'ny olona mandefa mora foana ny tiany. Ny votoaty rehetra misy dia misy amin'ny fiteny Bahasa, izay mety ho sarotra aminao ny hahazo azy raha tsy zatra azy ianao.
Noho izany, raha mahazatra anao ny fiteny Bahasa, dia afaka manana fialamboly tsara indrindra amin'ny fiainanao maimaim-poana ianao. Misy sokajy samihafa hita ao amin'ity rindranasa ity, izay manome atiny hafa arakaraka ny sokajy lehibe.
Iray amin'ireo fizarana lehibe indrindra amin'ity rindrambaiko ity ny fizarana IPTV, izay manolotra ny fanangonana fantsona fahitalavitra lehibe indrindra. Misy fizarana kely kokoa hita ao amin'ity fahitalavitra ity, izay manolotra atiny manokana. Misy ny fizarana toy ny sarimihetsika, vaovao, fanatanjahan-tena, toetrandro, sns.
Hahazo ny fantsona mifandray amin'ireo fizarana ireo ianao. Noho izany, ny sokajy faharoa dia momba ny sarimihetsika, izay midika fa hanana fanangonana sarimihetsika ianao. Misy sarimihetsika nasionaly sy iraisam-pirenena samihafa hita ato amin'ity fizarana ity, anisan'izany ny fizarana bebe kokoa.
Misy ny fizarana ho avy, izay manolotra ny mpampiasa hahazo ny votoaty manokana rehetra. Misy fizarana toy ny hetsika, animation, horohoro, tantaram-pitiavana, adventure, sy ny hafa. Mila mitady karazana sarimihetsika tianao fotsiny ianao ary miditra amin'io fizarana io. Hanana sarimihetsika an-taoniny mifandraika amin'ilay fizarana ianao.
Araka ny fantatrao dia misy ny sasany amin'ireo andian-tranonkala tsara indrindra avy any Torkia, izay azonao idirana amin'ny alalan'ity ihany koa Movie App. Aza manahy momba ny andiam-tranonkala hafa, satria izy io koa dia manolotra andiana andian-dahatsoratra marobe manerana izao tontolo izao. Noho izany, mila manokatra ny fizarana fotsiny ianao ary manomboka mivantana.
Ny atiny rehetra misy amin'ity fampiharana ity dia nomena anarana amin'ny fiteny Bahasa, izay midika fa hahazo traikefa tsara indrindra amin'ny fialamboly ianao. Manome endri-javatra maro hafa izy io, izay ahitana votoaty ho an'ny olon-dehibe ao anatiny. Noho izany, ilaina ny code Activation Proton TV hampandeha azy.
Ankehitriny, hieritreritra ny fomba hahazoana ny lakile ianao, ary avy eo izahay ho anao rehetra. Mila mametraka ity rindranasa ity amin'ny fitaovanao fotsiny ianao. Hanome asa vitsivitsy izy io, izay tokony hofarananao. Vantany vao vita ny asa dia hahazo ny kaody Proton TV ianao.
Noho izany, alao ny sehatra tsara indrindra ary manomboka mivantana. Ampidino ny Proton TV ho an'ny fitaovana Android ary apetraho. Rehefa vita ny dingana fametrahana dia afaka mampiasa ity fampiharana ity ianao. Raha manana olana amin'ny fidirana amin'ity app ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Hamaha ny olanao rehetra haingana araka izay tratra izahay.
anarana Proton TV
Anaran'ny fonosana premestak.apmsf
Developer Preme Stak
Maimaim-poana misintona sy mandefa
Fanangonana fialam-boly marobe
Mpizara marobe no manome fifandraisana malefaka
Mizotra malefaka amin'ny hafainganam-pandeha Internet
Built-in Player miaraka amin'ny Controllers
Ny fizotry ny fisintomana dia mora be. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao eto amin'ity pejy ity, izay ho hita eo ambony sy ambany. Manaova paompy tokana fotsiny eo aminy ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Proton TV Apk dia manolotra fanangonana fialamboly tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Sintomy ity fampiharana ity amin'ny bokotra hita etsy ambany ary ankafizo ny fotoana malalaka miaraka aminao. Raha mbola manana fangatahana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy Apps, Entertainment Tags Movie App, Proton TV, Proton TV Apk, Proton TV App Post Fikarohana